Kitra any Irlande: tsy hilalao intsony ao amin’ny Linfield i Hery Bastien - ewa.mg
News - Kitra any Irlande: tsy hilalao intsony ao amin’ny Linfield i Hery Bastien
Araka ny vaovao, tsy hilalao
intsony ao amin’ny ekipan’ny Linfield FC ilay Malagasy, i Hery
Bastien, amin’ny taom-pilalaovana manaraka. Tsy hanavao intsony ny
fifanarahany amin’i Hery i Roy Mac Givern, filohan’ny ekipa, ka
nametraka ny anaran’i Hery Bastien any amin’ireo mpilalao hifindra
Raha tsiahivina, ho tapitra amin’ny
faran’ity volana jona 2021 ity ny fifanaraham-pilalaovan’i Hery
Bastien, ao amin’ny Linfield FC. Heverin’ity mpitantana ny Linfield
FC ity fa manan-danja loatra ity mpilalao malagasy ity ka aleony
alefa mialoha ny hahataperan’ny fotoana satria lafo ny vidin’i Hery
Bastien. Raha tsiahivina, ny taona 2019 izy no nilalao tao amin’ity
ekipan’i Irlande ity. 29 taona i Hery Bastien ankehitriny ary
irakiraka mpanafika ny toerana misy azy. Efa nandrombaka ny ho
tompondakan’i Irlande izy. Anisan’ireo mpilalao nantsoin’i Nicolas
Dupuis, nandrafitra ny Barea de Madagascar, tamin’ny fifanintsanana
indroa miantoana, nikatrohana tamin’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire
ireny i Hery Bastien.
Ankehitriny, miandry izay klioba
handray azy indray izany i Hery Bastien, izay tena ao anatin’ny
tanjany tanteraka ary manana ny fahaiza-manao mampiavaka azy, eny
L’article Kitra any Irlande: tsy hilalao intsony ao amin’ny Linfield i Hery Bastien a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 08/01/2021
Olona maro no fantatra fa efa maty novonoin’ity lehilahy iray malaza ratsy amin’ny fanakanan-dalana any amin’iny lalam-pirenena faha-13 iny. Tsy mifidy lasibatra izy satria vao haingana no nanaperany ny ain’ny vadiny, izay bevohoka, tamin’ny alalan’ny lefona. Saika mbola hamono ny rainy (lehilahy manome lamosina amin’ny sary eo amin’ny pejy voalohany) izy no lavon’ny zandarimaria tany Bekily, afak’omaly hariva. Nikoizana ny asan-jiolahy notarihin’io lehilahy tamin’ny lalam-pirenena faha-13 mampitohy an’ Isoanala sy Beraketa, tahaka ny fampihorohoroany ny distrikan’i Bekily. Vao andro vitsy izay no namoizan’ny vadiny ny ainy. Mbola teo am-pitondrana vohoka ilay vehivavy no maty tsy tra-drano vokatry ny tsatoka lefona nahazo azy. Nahazo fampandrenesana momba ny fivezivezen’ ity lehilahy tany Manakoliva-Bekily ny mpitandro filaminana, tamin’ity herinandro ity. Fanampian’ny rainy Hitan’ireo zandary nalefa namita iraka hisambotra azy tokoa izy. « Sady nitoraka lefona ilay lehilahy rehefa nahatazana an’ireo zandary hisambotra azy no nirifatra nitsoaka, tamin’ny alarobia hariva tokony tamin’ny 5 ora. Voatifitra teo amin’ny lamosiny izy ary nitarika tamin’ny fahafatesany », hoy ireo zandary any Bekily. Nampitain’ny loharanom-baovao avy any an-toerana ihany koa fa teo am-pikasana hamono ny rainy io jiolahy io no izao tra-tehaka sy lavon’ny bala izao. Isan’ireo nanampy ny mpitandro filaminana tamin’ny fanenjehana azy ny fianakaviany notarihin’ny rainy, talohan’ny fahafatesany. Nambaran’ny mponina any Manakoliva-Bekily fa efa nigadra tao amin’ny fonjan’i Betroka noho ny raharaha vono olona itsy lehilahy itsy saingy tafavoaka ny fonja hatrany. L’article Jiolahy raindahiny :: Notsatohany lefona ny vadiny bevohoka est apparu en premier sur AoRaha.
Fambolena : tsy ampy 10 % ny velaran-tany voavoly
Maro anisa ny Malagasy, 80 % mivelona amin’ny se­hatry ny fambolena, miantoka ny 30 % amin’ny harinkarena faobe eto an-toerana, 43 % raha mihodina ny indostria momba ny fambolena (vary, siramamy, menaka, lafarinina …). Tarehi­marika ireo fa ny toeran’ny fahantrana voalohany ny any ambanivohitra. Tsy misy fiovana ny fomba fambolena. Manamarina izany voalohany, tsy ampy 10 % no voavoly amina velaran-tany azo volena 36 tapitrisa ha, porofo iray koa ny tsy maintsy fanafarana vary isan-taona. Tsy misy fanavaozana ny masomboly, tsy ampy ny fampiasana zezika sy fanafody fiarovana ny voly amin’ny bibikely. Tsy misy fiovana na mi­hena mihitsy ny vokatra noho ny faharatsian’ny fotodrafi­trasa ho an’ny fambolena, fiovan’ny toetr’andro, fifindra-monina amin’ny tanàn-dehibe… Noho ireo antony maro ireo, kely ny vokatra, ohatra : 2,1 t/ha ny vary, 1t/ha ny katsaka, 0,9 t/ ny tsaramaso. Tsy ahitana taratra an’i Madagasikara any ivelany intsony, ohatra, ny kafe, ny akondro… Lavanila (1800 t), letisia (17 000 t) sisa izao no malaza, saingy efa betsaka ny mpifaninana, toy ny atsy Afrika Atsimo.Soa fa misy mpamatsy volaNanomboka ny taona 2011, efa ratsy toerana i Madagasi­kara amin’ny tsy fahampian-tsakafo, araka ny tatitra nataon’ ny PAM sy ny Unicef. Soa fa misy ihany ireo vondron’ny fi­kambanana samihafa, ONG sy masoivoho iraisam-pirenena isan-karazany manampy amin’ ny famatsiam-bola ho an’ny tetikasa maro eo amin’ny se­hatry ny fambolena sy ny fiom­piana.R.MathieuL’article Fambolena : tsy ampy 10 % ny velaran-tany voavoly a été récupéré chez Newsmada.
Amin’ny 25 hatramin’ny 27 avrily ho avy izao no hotanterahina ny fifaninanam-pirenena hidirana ao anatin’ny Fitantanan-draharaham-panjakana manerana ny Nosy. Dimy arivo sy iray alina no isan’ireo Malagasy hifaninana izay miparitaka manerana ny Nosy. Ho an’ireo kandidà eto Analamanga dia fantatra fa efa afaka maka ny taratasy fiantsoana azy eny amin’ny Ivon-toeram-pirenena manofana ho mpiasam-panjakana (INFA) Androhibe izy ireo, manomboka anio. L’article Fifaninanam-panjakana est apparu en premier sur AoRaha.
Antenimierandoholona: vehivavy mpitsara ny solontena roa ho eo anivon’ny HCC
Samy notanterahina, omaly, avokoa ny fifidianan’ny parlemanta roa ireo solontenan’izy ireo ho eo anivon’ny HCC. Niavaka ny tetsy Anosikely raha tsy nampoizina kosa ny teny amin’ny Antenimierampirenena.Nahazo vato be indrindra tamin’ireo kandidà miisa 17 nofidin’ireo loholona nifidy Rojoniaina Ranaivoson Andriamaholy, mpitsara « Magistrat de 2ème grade 1ère échelon » sy Rakotoniaina Antonia, mpitsara « Magistrat de 1ère grade ».Nambaran’ny mpampaka-teny eo anivon’ny Antenimierandoholona, Rasolondratsimba Raymond fa tsy nisy mihitsy ny toromarika manokana tamin’ny latsa-bato « consigne de vote ». Nanjaka tanteraka ny demokrasia ary nalalaka ny tsirairay teo am-panatanterahana ny adidiny. Hita taratra tokoa izany satria efatra ireo kandida nahazo vato, saingy izy roa ireo no nahazo ny ambony indrindra.Etsy an-daniny, voafidin’ireo solombavambahoaka koa ireo solontena roa avy amin’ny Antenimierampirenena ho etsy Ambohidahy. Samy mpahay lalàna avokoa izy ireo, ahitana an-dRasolo Nandrasana Georges Merlin, nahazo vato 71 tamin’ireo depiote mpifidy 147. Efa nisahana ny tale kabinetra teny anivon’ny primatiora Mahazoarivo tamin’ny fotoan’androny, niaraka amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian. Efa mpikambana teo anivon’ny « Cour électorale spéciale – CES ». Eo koa Noelson William. Efa minisitry ny Asa sy ny asam-panjakana, fony fitondrana Tetezamita (2009 – febroary 2011).Niova tamin’ny ora farany…Kandidà roa hafa no efa naresaka sy heno teny an-dalantsaran’ny CCI sy Tsimbazaza fa tokony hofidina, saingy izao nivadika tamin’ny fotoana farany izao. Tsy nanolotra kandidà koa ny avy amin’ny vondrona parlemantera Tim, saingy nanohana an’i Noelson William ary izao lany izao rehefa nifandresy lahatra tamin’ireo avy amin’ny tsy miankina. Ankoatra izany, hotantarehina ny zoma izao ny fifidianan’ny eo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) ireo solontena roa koa avy amin’izy ireo ho ao amin’ny HCC. Maherin’ny 40 ireo kandidà hofidin’izy ireo. Manampy izany ny telo hotendren’ny filoham-pirenena ka hahafeno ireo mpikamban’ny HCC ho sivy izany.Tsiahivina fa maharitra fito taona tsy azo havaozina ny fe-potoana hiasan’izy ireo, araky ny voalazan’ny Lalàmpanorenana.Synèse R.L’article Antenimierandoholona: vehivavy mpitsara ny solontena roa ho eo anivon’ny HCC a été récupéré chez Newsmada.
Fanaparitahana laza adina Bacc sandoka: mpampianatra iray sy mpianatra telo naiditra am-ponja
Laza adina hosoka amin’ny taranja histo-géo ho an’ny fanadinana bakalorea no nisy nanaparitaka amin’ny tambajotra sosialy, ny asabotsy lasa teo tany Antalaha sy tany Ihorombe ary teto Antananarivo. Ho an’ny any Antalaha, mpianatra iray no nandefa amin’ny tambajotra sosialy Facebook ny laza adina amin’ny taranja histo-géo ary amidy 150 000 Ar ho an’ny mpiadina bakalorea liana. Rehefa nandihady ny tomponandraikitra, hosoka ilay laza adina nivoaka satria tsy nanaraka ny “code” rehetra ampiasaina amin’ny “interligne”, ny “espace” sy ny “police”… Tsy nivoaka avy amin’ny mpampianatra mihiboka manomana ny laza adina. Noforonina hanakorontana ny mpiadina amin’ny fanadinana ity tranga ity mialoha ny hirosoana amin’ny bakalorea manomboka anio.Nitovy ny tranga niseho tamin’ny toerana telo voalaza, araka ny fampitam-baovao azo ary efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny raharaha sy ny fanadihadiana.Taorian’ny fiakarana fampanoavana, nampidirina am-ponja vonjimaika ilay mpampianatra sy ireo mpianatra telo voarohirohy tamin’ity fanaparitahana laza adina sandoka ity. Nanamarika ny mpitandro filaminana fa ho hentitra ny fanaraha-maso amin’ireo foibem-panadinana manerana ny Nosy, manomboka anio.Tetsy andaniny, nirary soa ho an’ny mpiadina rehetra hanatanteraka ny fanadinana anatin’ny fitoniana ny minisitry ny Fampianarana ambony, ny profesora Assoumacou Léa Béatrice. Nisaotra manokana ireo mpampianatra mihiboka sy ireo rehetra nikarakara ny fanadinana ny tenany. Hiatrika ny taranja filozofia ny mpiadina 164 338 manerana ny Nosy ny tapak’andro maraina.Vonjy A. sy Henintsoa HaniL’article Fanaparitahana laza adina Bacc sandoka: mpampianatra iray sy mpianatra telo naiditra am-ponja a été récupéré chez Newsmada.
Mihejan-droa ny tady ao amin’ireo mpino kristianina ao amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy Ankorondrano. Misy andiana mpino mikasa hanokatra amboletra ny fiangonana rahampitso. « Manoloana izany, nampahafantatra ny mpikambana ny filankevitra voafidy tamin’ny fivoriambe fa tsy mbola misy mihitsy ny fifanarahana ho famahana ny disadisa nitranga teo anivon’ny fikambanam-pivavahana Jesosy Mamonjy », hoy Ranaivoarisoa Gilbert, mpikambana eo anivon’ny filankevi-pitantanana. Nambarany fa nisy nangataka manokana ny depiote Naivo Raolidinina ho mpanelanelana ny raharaha fa tsy niera nialoha amin’ny samy mpikambana ny filankevi-pitondrana.Tsiahivina fa nakaton’ny fanjakana, ny 17 marsa teo, ity fiangonana ity taorian’ny fifampikasihan-tanana teo amin’ireo samy mpino sy ny fanimbana ny fitaovam-piangonana. Tranga niseho taorian’ny fifidianana ny ho filoha vaovao hitantana ny fiangonana ny 7 febroary teo.Nilaza ny depiote fa tsy miditra amin’ny raharaham-piangonana ny fanjakana ary miangavy ny fanjakana hijery akaiky ny raharaha. « Amin’ny finiavana hamoha ny fiangonana raha tsy misy ny fifanarahana mazava an-tsoratra voasonian’ny mpikamban’ny filankevi-pitondrana », hoy hatrany Ranaivoarisoa Gilbert.“Tsy mazava ny rakitra sy ny ampahafolon-karen’ny fiangonana. Tsy voaloa ny vidin-jiro mitentina 17 tapitrisa Ar, maro ny fitantanana tsy mazava ka matahotra raha ny pasitera Randrianantoandro Raymond ny ho mpisolo toerana vonjimaika hitondra ny fiangonana”, hoy hatra ny fanazavana avoaray. Mandà tanteraka ny fanerena azy ireo handray ny sori-dalana mivaona amin’ny sata sy ny fitsipiky ny fiangonana koa ireo mpino. Araka ny fantatra, hiambina eny Ankorondrano ny mpitandro filaminana rahampitso. Andrasana ny tohin’ny raharaha. Henintsoa HaniL’article Jesosy Mamonjy Ankorondrano: misy mikasa hanokatra ny fiangonana, rahampitso a été récupéré chez Newsmada.